lulu: အခေါ်အဝေါ် (၄)
at 11:22 PM Labels: အခေါ်အဝေါ်
how to call ဖက်ဖယ်ရွက်၊ in english, sis?
Laksa leaf or Vietnamese Coriander လို့အခေါ်ရှိပါတယ်.. ဖယ်ဖယ်ရွက်ကို..။
လုလု May 13, 2010 at 5:47 PM
မမလုက ဖယ်ဖယ်ရွက်ကို အပြင်မှာ မမြင်ဖူးဘူးနော်၊ ဒါပေမယ့်လေ ဂျာမုန်းရဲ့ လင့်ခ်ရယ်၊ မ ရဲ့ မိတ်ဆွေ ကချင်တစ်ယောက်ကို မေးပြီးတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားရှာလိုက်တာ http://aidanbrooksspices.blogspot.com/2007/10/coriander-vietnamese.html အဲ့ဒီလင့်ခ်လေးတွေ့တယ်၊ အဲ့ဒီအရွက်က ဖယ်ဖယ်ရွက် ဟုတ်မဟုတ်တော့ မမလု မသေချာပါဘူးနော်။ အဲ့ဒီလင့်ခ်လေးကို စစ်ကြည့်ပြီး ဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာကြီးပေါ့နော်။ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးနော်။
Botlay September 12, 2011 at 8:06 AM
How do you call " ဂျူးမြစ် " in English?
I planted it, but i don't know how to hervest them.
ခေတ်စာဆို January 29, 2013 at 11:15 AM
ဂျူး မြစ် ကို Allium Hookeri လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က Leek Root လို့ပြောပေမယ့် Leek Root က ကြက်သွန်မိတ် မြစ် နဲ့ ပိုတူပါတယ် ။
ပဲထွန် အင်္ဂလိပ်အခေါ်အဝေါ်လေးများသိရင်လဲ ပြောပေးကြပါဦးဗျာ...။
Zee July 8, 2020 at 8:08 PM
I think ပဲထွန် is also called ပဲကြား which is Lime Bean.
Zee July 8, 2020 at 8:11 PM
Here is the link where the author wrote "ပဲထွန်ခေါ် ပဲကြား" https://www.foodmagazinemyanmar.com/contributors/ပဲထွန်ကြော်/